Ndeapi mazano ekuvaka matanho achave anokosha muna 2018?
Zvinotarisirwa kuti mitsara yemitemo itsva yekuvakira ichashandiswa mugore rinotevera. Zvisinei, zvinyorwa zvitsva zvichagara zvakafanana. Gore rinouya richaita kuti tive nehuwandu hwekushandurwa kwema digital uye matsva ekugadzirisa maitiro. Izvozvo zvinonzi mazano ekugadzira zvichange zvichitora iyo yose yekutsvaga injini yekugadzirisa nyika, inoda mitsva itsva kune vose mafoni uye desktop SEO uye web design. Vashandi vewebhu vanozofanira kutarisa nzira itsva dzekuita zvinotungamirira. Zvinotarisirwawo kuti Google mobile-first rank algorithm inoshandura zvakanyanya yako mharidzo yezvino maererano nekambani yemagetsi uye kugadzirisa nyika ye SEO.
Nyaya ino yakagadzirirwa kuratidza vaverengi kuti marheni yemodhi ichachinja sei mugore rakatevera uye chii chatinofanira kutarisira kubva pane izvi.
Backlinks sejini SEO muna 2018
Mumakore mashomanana apfuura, mitemo yekuvakwa kwechikwata yakashandurwa kakawanda. Zvisinei, nheyo dzese dzinoramba dzichifanana. Chinangwa chikuru chekutsvaga injini yekugadzirisa chichiri kugovera tsvakurudzo-yakagadzirirwa uye inogadzirisa zvinyorwa kune vaverengi. Kana zviri zvako zvakakosha kuverenga, zvichave zvichigoverwa pakati pevashandisi izvo zvichakuunzira iwe majunji ejw.org.
Backlinks icharamba iri injini yekutsvaga injini yekutsvaga muna 2018 uye mberi. Unhu hunodzoka shure pamwe chete nehutano hwakanaka hwekushandurwa kwewebsite nekugadzira huchaunza hutachiona hunoendeswa kune yako nzvimbo uye webhusaiti yevashandisi vekushandura nzvimbo yaunofarira. Google ichasarudza kukosha kwako kwepaiti uye zvakakosha, zvichibva pachiremera chemawebsite yako hushamba hunobva. Iyi nzira inoramba yakasimba kubvira pakupedzisira kweGoogle Panda.
Anotarisirwa kuti zvivakidzani zvivakidzani zvekuvakwa muna 2018
Backlinks ichasarudza mukurumbira wako wepaiti, simba, nekuvimbika;
Zvose kutengeserana kwema digital zvichaendeswa nehuhu hwehuwandu;
Kupikisana kuchave kwakakwirira kudarika mazuva ano;
kukosha kwemashoko makuru kunokosha zvikuru;
Link joice inofanira kuuya chete kubva kune mawebsite anovimbika.
Nzira dzehupenyu-huchapupu hwekuvaka matanho ekudzokorora
Tichiri kure ne 2018, asi iwe unofanirwa kuziva humwe huchachinja huchaitika ruzivo rwunofambira mberi. Iwe unofanirwa kuziva kuti mazano ekugadzira mazano achave ane simba kune bhizinesi rako uye chii chaunofanira kurega kushandisa nekuda kwekutsvaga zvinangwa. Aya anotevera-mazano ekugadzira mazano ekugadzira achakubatsira kuti urambe uine huwandu hunoshandiswa hwekutsvaga kudhinda.
Mazuva ano, vazhinji vema webmasters uye veongororo veSEO vanoenda kuzogadzirisa matanho ekuvakisa mazano avo.Zvechokwadi, inogona kunyanya kuchengetedza nguva yako, asi haizoiti nemigumisiro yakafanana iyo iwe unogona kuita zvose zvese. Ndinokukurudzira kuti urege kushandura mafaira ako ekutumira uchishandisa tsamba-yakaiswa tsamba yakagadzirwa nepurogiramu. E-mail yakadai haizokurudzire kushandiswa kwevashandi uye kugadzira pfungwa dzisina kunaka pamusoro pekodhi yako. Panzvimbo yazvo, nyora maimeri yako, uise mweya wako pane imwe neimwe. Zvisinei, haisi kurega kushandisa sarudzo yakawanda yechinangwa ichi.
Shingairira nezvehutano hwehupenyu hwako
Muna 2018 zvinyorwa zvicharamba zvichiita basa rinokosha zvikuru muSeO. Saka, usati watanga kutsvaga nzvimbo dzingakwanisa kuisa backlink, onai kuti une chikonzero nei vachifanira kukubatanidza iwe pakutanga. Chinhu chinogara chiri nzvimbo yakakodzera kuti utange webhusaiti yako yekuita maitiro. Kuita kuti vanhu vaone chiratidzo chako, iwe unofanirwa kuumba yakakwirira uye tsvakurudzo-based articles dzine ruzivo rwevadzidzi Source .